COVID-19: Dalka Talyaaniga oo qaati laga taagan yahay xirashada maaskada iyo dibedbaxyo looga soo horjeedo oo la dhigay – Calanka.com
COVID-19: Dalka Talyaaniga oo qaati laga taagan yahay xirashada maaskada iyo dibedbaxyo looga soo horjeedo oo la dhigay
Shacabka dalka talyaaniga ayaa bilaabay in ay muujiyaan shucuurtooda ku aadan in ay qaati ka taagan yihiin xirashada maaskada wajiga ee looga hortagayo faafidda cudurka coronavirus.
Magaalada Rome ayaa waxaa laga dhigay dibedbax looga soo jorjeedo xirashada maaskada oo iminka xitaa lagu khasbay carruurta iskuulada dhigta, waxaana ay dadku dalbanayaan in laga qaado xayiraadaha COVID-19 oo ay ka mid tanay xirashada maaskada iyo tallaalka khasabka ah ee cudurkaasi.
Sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka dalkaasi cudurka COVID19 oo iminka kusoo laba-kacleeyay dalkaasi uu galaaftay nolosha dad kor u dhaafaya 35,500 oo ruux, waxaana uu ku dhacay guud ahaan 276,000 oo ruux.
Dibedbaxayaasha ayaa sitay boorar ay ku qornaayeen “No masks, no social distancing. Personal freedom is inviolable” and “Long live liberty”, oo micneheedu yahay “Maya maasko, maya kala fogaansho dadka ah. Xorriyadda shakhsiga waa lama taabtaan iyo Xorriyaddu ha noolaato”.
Ra`iisal wasaaraha dalkaasi Prime Minister Giuseppe Conte oo cabashada dadkan ka hadlay ayaa u ballanqaaday in aysan jiri doonin xayiraado dheeraad ah oo ay dowladdu soo rogi doonto balse ay qaadeyso tallaabooyinka muhiimka ah.
Kiisas cusub oo cudurkan ah oo dalkaasi laga helay ayaa waxaa la sheegay in ay ka dhasheen dhimashada 16 ruux oo horleh.